एकाङ्की : दर्द - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : जन्तर
कविता : परिनिष्ठित मनको खोजी →
मञ्जरी ःअधबैँसे नारी, पतिले त्यागेकी, दुई सन्तानकी आमा, दुःखजिलो गरेर गुजारा चलाइरहेकी गृहिणी, आफ्ना दुई सन्तानको भविष्य उज्यालो बनाउने काममा कटिबद्ध ।
बबलध्वज ः गाउँका एकजना सज्जन, आफ्नो सुखभन्दा अर्काको सुखमा आनन्द प्राप्त गर्ने स्वभाव, गाउँको हालखबर बुझ्दै हिँड्ने निःस्वार्थी मान्छे, जसलाई कतिपयले नारदको संज्ञा पनि दिने गरेका छन् । उनलाई श्रीमतीले पनि अर्धपागल भनेर त्यागिदिएकी छिन् ।
प्रमोद ः मञ्जरीको ८ बर्से छोरा ।
प्रमिला ः मञ्जरीकी ११ वर्षकी छोरी ।
प्रकाश ः बबलध्वजका छिमेकी र सहयोगी ।
स्थान ः सामान्य भुइँतले घरको दलान र आँगन(मञ्जरीको सपरिवार त्यहाँ बसाइँ सरेको छ महिनामात्र भएको छ । उनी त्यस नयाँ गाउँका सबै मानिसलाई चिन्दिनन् र उत्तिसाह्रो वास्ता पनि राख्दिनन् । लोग्नेले त्यागेकी आइमाई भनेर कसैकसैले कुरा काट्छन् । त्यस्ता घटनाबाट उनी त्रसित छिन् ।प्रमोद र प्रमिला सामान्य भुइँतले घरको दलानमा पढिरहेका छन् भने उनीहरूकी आमा मञ्जरी आँगनको एक कुनामा गिटी कुटिरहेकी छिन् । नजिकै ठूल्ठूला ढुङ्गा थुपारिएका छन् । उनको पेसा नै गिट्टी कुट्ने हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । एउटै मञ्च दुई भागमा विभक्त छ ।)
मञ्जरी ः (दलानमा पढिरहेका प्रमोद र प्रमिलातर्फ सङ्केत गर्दै) लौ छोराछोरीहरू, राम्ररी पढ है । जसले धेरै पढ्छ, उसले धेरै ज्ञान बटुल्छ । जसले धेरै ज्ञान बटुल्छ, उसले धेरै धन कमाउँछ । जसले धेरै धन कमाउँछ, उसैले सुख पाउँछ । सुख पाउने कि दुःख पाउने ? यो कुरा तिमीहरूकै हातमा छ ।
प्रमोद ः हुन्छ मामू, त्यसमा तपाईंले चिन्तै लिनु पर्दैन । पढ्दापढ्दा किताबै कण्ठ हुन लागिसक्यो ।
प्रमिला ः म पनि पढिरहेकी छु । मैले दिएको पाठ त याद छ नि तपाईंलाई ? तपाईंले मलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ ।
मञ्जरी ः हुन्छ बाबा, हुन्छ । म मेरी प्यारी छोरीका हर आज्ञा शिरोधार्य गर्न तयार छु । (सबै आ–आफ्नै काममा मग्न हुन्छन् । कामबाट आँखा हटाउने फुर्सद कसैलाई हुँदैन । त्यसैबेला मञ्जरी बबलध्वज र प्रमोद आउँछन् । मञ्जरी शिर उचालेर उनीहरूलाई पुलुक्क हेर्छिन् र आफ्नो काममा क्रियाशील भइरहन्छिन् । उनीहरूप्रति उत्ति साह्रो वास्ता राख्दिनन् ।)
बबलध्वज ः हजुर मञ्जरीजी, घुम्दैफिर्दै यहाँ आइपुगियो । तपाईंको घर बाटैमा रहेछ । गाइँगुइँ केही कुरा सुनेको थिएँ । वास्तविकता बुझ्न मन लागिरहेछ ।
मञ्जरी ः विनाभूमिका खुलस्त भन्दा हुन्छ । हुनत धेरै कुरा सुनेकी छु । अझै सुन्नुपर्छ भने सुनुँला ।
बबलध्वज ः आजसम्म त तपाईंको र मेरो बोलचाल नै भएको छैन । परको मरिचे माइलोले तपाईंका बारेमा एकाध कुरा भन्यो र वास्तविकता बुझ्न आएको हुँ ।
मञ्जरी ः (आफ्नो लोग्ने नभएकोले आफूलाई जिस्काउन आएको शङ्का गर्छिन् र हेर्दै नहेरी अटेरी भएर)त्यति धेरै कुरा सुन्ने फुर्सद छैन मलाई । मैले जीवनमा धेरै सुनेँ । पहिलेको गाउँमा पनि सुन्नै नसक्ने कुरा सुनेँ र हार खाएर यहाँ आएँ । यहाँ पनि मनग्गे सुनिसकेँ । (झर्को मान्दै) कतिका कस्ता–कस्ता कुरा सुन्न जुरेको छ !
बबलध्वज ःहैन, नराम्रो कुरो सुन्न र सुनाउन म आएको हैन ।
मञ्जरी ः धेरै कुरा सुन्नु पनि छैन र बुझ्नु पनि छैन मलाई । मेरो संसार यही गिट्टी हो । गिट्टीको थुप्रो जति ठूलो भयो, त्यति नै राम्ररी म मेरा दुई सन्तानको हेरचाह गर्न सक्छु । बस्, मलाई यति नै थाहा छ ।
बबलध्वज ः हजुर मञ्जरीजी, म यहाँ सुनाउन हैन सुन्न आएको हुँ । भन्नुस्, तपाईं कसरी यो हालतमा आइपुग्नुभो ? तपाईंका मुखराबिन्दबाट कुरा सुन्न पाए समस्याको निदानमा म पनि सहयोगी हुने थिएँ ।
मञ्जरी ः भो–भो, मसँग यस्ता रसिला र मीठा कुरा नगर्नुस् । अब म कसैको गुलियोको लोभमा फस्दिनँ । जवानी थियो, मगमगाउँदो फूलको थुँगा थिएँ । त्यही बास्नामा लठ्ठ परेर एउटा भमरा बस्यो । मसँग रस छउन्जेल चुस्यो । रस सकिँदै गएपछि अन्यत्रै गयो । त्यस्तै भमराका रूपमा आउनुभएको हो भने चुपचाप यहाँबाट गइहाल्नुस् किनभने अहिले म फूलको ओइलिएकी थुँगा भएकी छु । मसँग न रस छ न मगमगाउँदो बास्ना नै …. ।
बबलध्वज ः (मञ्जरीलाई बीचमै रोकेर) भो अब भो, मैले धेरै सुनेँ, मन अघायो । यहाँभन्दा बढी सुन्ने धैर्य मसँग छैन । म यतिखेर भ्रमको पात्र बनेछु । म कसैलाई भ्रममा राख्न चाहन्नँ । यतिखेर धेरै बोल्नुको अर्थ छैन । समय आएछ भने बोलौँला । अहिलेलाई यतिमात्र बुझिदिनुस्, म कुनै व्यतिmगत स्वार्थ लिएर आएको हैन । (प्रमोद र प्रमिला आफ्नै धुनमा लेखपढ गरिरहेका हुन्छन् । प्रकाश छट्पटिन्छ ।)
प्रकाश ः हैन, अब त जाऔँ । कुराको बिट मरेन ? (मञ्जरी आफ्नै काममा व्यस्त हुिन्छन् ।)
बबलध्वज ः (त्यहाँबाट प्रस्थान हुँदाहुँदै प्रकाशसँग) हिँड भाइ प्रकाश, यिनीसँग अहिले केही कुरा गर्नु हुन्न । यिनले अहिले भदौरे सप्तकोसीको रूप लिएकी छिन् । यिनले भनेका प्रत्येक शब्द वाण बनेर मेरो मुटु छियाछिया पारिरहेछ । म कसरी सहुँ ? मलाई त्यो बोली घाँटीसम्म आएको छ । एउटा पुरुषसँग उठेको रिस अर्को पुरुषमाथि खन्याउनु, के नारी धर्म हो ?
प्रकाश ः(मञ्चबाट निस्किँदै) आखिरमा कुनै पुरुषले त उनीमाथि अत्याचार गरेकै रहेछ नि, हैन र ? (स्विकारोक्तिस्वरूप बबलध्वज शिर हल्लाउँछन् र दुवै बाहिरिन्छन् ।)
प्रमोद ःदिदी, आवाज निकालेर पढ्नुस् न । म सुनेर पनि धेरै कुरा जान्दछु र बुझ्दछु । हामीले हरेक कुरा नजानीकन हुन्न ।
प्रमिला ः तिमी पढ न । म सुन्छु ।
प्रमोद ः मेरो किताब त हजुरले पढिसक्नुभएको छ ।
प्रमिला ः मेरो किताब पढ्ने तिम्रो बेला भएको छैन ।
प्रमोद ः किताब पढ्न, कुरा बुझ्न र ज्ञान बटुल्न पनि समय पर्खनुपर्छ र ?
प्रमिला ः अर्काको किताब पढ्नाले पास भइन्न क्या ।
प्रमोद ः के पढ्नुको अर्थ पास हुनुमात्र हो ?
प्रमिला ः प्रश्नमाथि प्रश्नका खात लगाइरहेका छौ तिमी । म तिम्रा हरेक प्रश्नको जवाफ दिऊँ कि आफ्नो गृहकार्य पनि तयार गरूँ ? विजय आखिरमा तिम्रै भयो ।
प्रमोद ः सधैँ सत्यको जित हुन्छ । म सत्यको पक्षमा थिएँ । आखिरमा सत्यवादी पाण्डवकै जित भएको थियो महाभारतमा । कौरव पक्ष युगौँयुगदेखि हारिरहेछन् । (हाँस्दै, ठट्यौलो पारामा एक्लै एकपक्षीय नारा लगाउँछ ।) यो जित कसको ? प्रमोदको । यो हार कसको ? किताब नपढ्नेको ।
प्रमिला ः भो–भो नारा नलगाऊ । नारा भए पनि तिम्रै जित, नभए पनि तिम्रै जित । अब त भयो ? आवश्यकताभन्दा बढी जो बोल्छ, त्यो हार्छ । ठिक्क खटाएर बोल्ने मान्छे विजयी हुन्छ । जीवनमा सधैँ विजयी हुने कुरा सोच्नुपर्छ र प्रयास गर्नुपर्छ ।
मञ्जरी ः बाबुहरू ! कुराकानीचाहिँ बढी भएजस्तो छ है । अब एकैछिन पढ अनि खाना खानुपर्छ ।
प्रमोद ः शुभकार्यमा किन विलम्ब ? अब ठीक पार्दा भइगयो नि ?
मञ्जरी ः ल, भइगो त । आओ । (प्रमोद जान्छ तर प्रमिला जान्न ।) नानी छोरी, किन नआएकी ? आऊ चाँडो । भान्साको काम सकौँ ।
प्रमिला ः मेरो सर्त पूरा भयो कि भएन ? म हजुरलाई खुसी पार्न खोज्छु । हजुरले मलाई खुसी पार्नुपर्छ । म त्यसबेला खुसी हुन्छु, जब मैले दिएको गृहकार्य लेखेर र घोकेर मलाई देखाउने र सुनाउने गर्नुहुन्छ । हिजो बेलुकी दिएको गृहकार्य मलाई चाहियो अनिमात्र म खाना खान्छु नत्र रिसाएर बस्छु ।
मञ्जरी ः नानी, त्यसो नभन न । पहिले खाना खाऊ । त्यसपछि मेरो गृहकार्य हेरौली । ज्ञानी मान्छेले धेरै जिद्दी गर्दैनन् त ।
प्रमिला ः ठीकै छ । खाना खाएरै हेर्छु र सुन्छु । मामूले भनेको पनि मान्नै प¥यो । (दुवैजना खाना खान थाल्छन् । मञ्जरी पनि खाना खान थाल्छिन् ।)
प्रमोद ः आजको खानेकुरा निकै स्वादिलो रहेछ ।
प्रमिला ः अरू दिन पनि स्वादिलै हुन्थ्यो त ? आजमात्र किन भन्यौ ?
प्रमोद ः खै मलाई थाहा छैन । अरू दिन यति स्वादिलो भएको थाहा छैन ।
मञ्जरी ः यसको कारण परिश्रम हो । आज बिहान सबेरै उठेर तिमीहरूले नुहायौ । त्यसपछि कसरत ग¥यौ । अहिले तिमीहरू मानसिक श्रम गरिरहेका छौ । यसले गर्दा शरीरका सम्पूर्ण अङ्गप्रत्यङ्ग चलायमान भए । तिमीहरूका बौद्धिक र शारीरिक कसरत भए तसर्थ आज शरीर फुर्ती भएको महसुस गर्दै छौ होला, हैन ?
प्रमोद ःनिश्चय नै मामू ! तपाईंले भनेजस्तै भएको छ । अब मलाई आज जस्तै गरी सधैँ चाँडै उठाइदिनुहोला । सूर्योदयपूर्व नै म आफ्नो काम सकिसक्छु । दिनदिनै थोरै समय दिँदा बौद्धिक र शारीरिक पक्ष सबल हुन्छ र सुदृढ हुन्छ भने यस्ता कुरामा किन आनाकानी ?
प्रमिला ः भाइसँग म पनि सरिक हुन्छु ।
मञ्जरी ः (खुसी हुँदै) राम्रो सोच मनमा ल्यायौ । म अति नै प्रसन्न छु आज । तिमीहरू हाँसीखुसी रहनु मेरो सौभाग्य हो । उत्पादनमुखी शारीरिक र मानसिक कसरतले व्यतिmव्यतिmमा परिवर्तन ल्याउँछ र पूरै समुदायलाई सपार्छ भन्ने कुराको पुष्टि भइसकेको छ ।
प्रमोद ः हो मामू ! बबलध्वज अङ्कलले पनि यी र यस्ता कुरा धेरै अघि भन्नुभएको थियो ।
प्रमिला ः स्कुलमा कुनै सर अनुपस्थित भएका बेला उहाँ आफैँ आउनुहुन्छ । हाम्रो हेडसरले उहाँलाई नै कक्षा लिन आग्रह गर्नुहुन्छ । उहाँ सारै राम्रा कुरा सुनाउनुहुन्छ । उहाँले भनेका धेरै कुरामध्ये एउटा कुरा सुन्नुहुन्छ मामू ? (बबलध्वजको नाम सुन्नासाथ मञ्जरी तीनछक्क पर्छिन् । उति वास्ता नगरे जस्तो गर्छिन् तर मनमा भने जिज्ञासा उब्जिरहन्छ ।)
प्रमोद ः (हतारिँदै) भन्नुस् न दिदी, हामीलाई त जहिले पनि सकारात्मक चिन्तनका साथ शारीरिक र मानसिक कसरत गर्नू स्मरण शक्ति बढ्छ, अन्य कैयौँ लाभ मिल्छ, कहिल्यै रोगले समात्दैन भन्नुहुन्छ । तपाईंहरूलाई चाहिँ केके भन्नुहुन्छ, दिदी ?
प्रमिला ः सुन, हाम्रो अहिलेको शिक्षाले बुद्धि कम र महत्वाकाङ्क्षा बढी सिकाउँछ रे । आजकल पढेका मान्छे बढी महत्वाकाङ्क्षी हुनु यसको प्रमाण हो रे । एउटा विद्यार्थीले हिँड्डुल गर्दा सामान्य ठक्कर लगाएछ र माफ मागेछ । अर्काले भने माफ नै दिएनछ र उल्टै त्यसलाई पर्खालमा ठोक्काएर रगतपच्छे पारेछ । यस प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभयो– एकपटक बुद्धले शिक्षादीक्षा प्राप्त गरिसकेका एक शिष्यलाई आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको प्रचार गर्न लगाउनुभएछ । शिष्य भारतको विहार राज्यको एक दुर्गम गाउँमा ज्ञानको प्रचार गर्न जान तयार भएछ । यो देखेर बुद्धले जाँच लिनका निम्ति भन्नुभएछ– त्यहाँका मान्छे खराब छन् । तिमीलाई गाली गर्न सक्छन् । उनले उत्तर दिएछन्– त्यहाँका मान्छे कति जाती रहेछन् केवल गाली गर्दा रहेछन् । कुटपिट पनि गर्न सक्थे । बुद्धले अगाडि भन्नुभएछ– उनीहरूले तिमीलाई कुटपिट पनि गर्न सक्छन् । त्यसबेला के हुन्छ ? उनले सहज भावमा जवाफ दिएछन्– मेरो मनमा यही भावना आउँछ कि त्यहाँका मानिस कति असल रहेछन् केवल कुटपिट गर्दा रहेछन्, मार्न पनि सक्थे तर त्यसो गर्दा रहेनछन् । बुद्धले मौका छोप्दै भन्नुभएछ– उनीहरूले तिमीलाई मार्न पनि सक्छन्, मर्ने बेलामा चाहिँ के सोच्छौ ? उनको जवाफ थियो– हजुरबाट प्राप्त ज्ञान प्रेमको नजरले संसारलाई हेर भन्ने हो, यो कुरा महसुस गर्र्दै म कथंकदाचित् बाँचेको भए मबाट कतै भुल हुन सक्थ्यो, त्यस्तो भुल हुन र गर्नबाट म जोगिएँ । मेरो नजर प्रेमको भावनाले भरिएकोले म सर्वत्र प्रेमकै नजरले हेर्छु, मर्नै प¥यो भने पनि मर्ने बेलामा भुल गर्नबाट बचेँ भनेर सोच्छु । हामी यस्तो लचिलो बन्न त नसकौँला तर कोही प्रायश्चितले जलेको छ र गलेको छ भने क्षमाशील बन्न सक्छौँ ।
प्रमोद ः अर्थोक पनि भन्नुस् न दिदी ।
प्रमिला ः अरू थुप्रै कुरा छन् । भनेर साध्य छैन । मात्र सङ्केत गर्न सक्छु । सुन, हामीले जानेको ज्ञान र सीप आफूमा मात्र सीमित राख्नु हुन्न । यसले लोककल्याणको बाटो पक्रिनुपर्छ । जब हाम्रो ज्ञानले समाजलाई उज्यालोपन दिन सक्तैन, तब त्यस खाले ज्ञानको खाँचो यस युगलाई छैन । मुक्ति सङ्ग्राममा हामी लामबद्ध हुन सके शोषितपीडित भएर कसैले रहन पर्दैन रे । श्रमको उचित मूल्याङ्कन जहाँ हुन्न, जहाँको उत्पादन लोककल्याणको साटो विनाशकारी हुन्छ, त्यहाँ श्रम दिनु ठूलो भुल हुन्छ । जसरी भए पनि आफ्नो श्रमले लोकको कल्याण गर्नुपर्छ ।
मञ्जरी ः (मनमनै सम्झेर) यी बबलध्वज भन्ने मान्छे त साह्रै असल पो रहेछन् ! बित्थामा चाहिँदो नचाहिँदो कुरा भनेँ । चित्त दुखाए होलान् । मेरै हितका कुरा पो गरेका रहेछन् । मैले कुरै सुन्न चाहिनँ । कसका कुरा सुन्नु ? कति आइमाईले भनिसके मलाई– ’बबलध्वजकी पत्नी छैन, तिम्रो लोग्ने छैन । ठ्याक्कै जोडा मिलेको छ, विवाह गर ।’ मलाई मन नपरेको कुरा यही थियो । केवल अरूसँग उठेको रिस बबलध्वजमाथि खन्याएर भुल गरेँ ।
प्रमिला ः (मामू झोक्राएको देखेर चकित हुँदै) मामू ! किन झोक्राउनुभएको ? मैले अन्यथा भने र ?
मञ्जरी ः हैन–हैन । तिमीले त्यस्तो केही नराम्रो भनेकी छैनौ । जे सुन्यौ, जे बुझ्यौ; ठीक बुझ्यौ । मेरो चित्त बुझ्यो ।
प्रमिला ः तर मेरोचाहिँ बुझेको छैन ।
मञ्जरी ः किन ?
प्रमिला ः मैले गृहकार्य हेर्न पाइनँ नि ।
मञ्जरी ः ए ! पढाउन त पढाए नानी तर लेख्न हातै चल्दैन । कामले फुर्सद पनि पाउँदिनँ । अहिले यो उमेरमा मरिहत्ते गर्दा पनि नहुँदो रहेछ । उतिखेरको कहिरन अर्कै छ ।
प्रमिला ः कस्तो कहिरन मामू ?
मञ्जरी ः तिम्रो यो बानी मलाई असाध्य मन प¥यो । यसरी जुनसुकै कुराको जरोसम्म पुग्ने बानी राम्रो हो । हेर नानू, तिम्रो यो र मेरो त्यो उमेर, संस्कार एवं चालचलनका बीच आकाश पातालको फरक छ । हामी त्यतिखेर जरुर पढ्थ्यौँ तर तिमीहरूको जस्तो कापीकिताब लिएर हैन । तिमीहरूको जस्तो स्कुल धाएर हैन । घरमा नै सबै कुरा पढ्नुपथ्र्यो । आमा हजुरआमाहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो । पढ्ने कुरा यिनै हुन्– (वस्तुलाई देखाउँदै) कुचो, मस्को र पोतो । अरू पनि भन्नुपर्दा खुर्पी, हँसिया, कुटो, कोदालो आदि । अहिले तिमीहरूका लागि किताब, कापी, कलम भएजस्तै यिनै वस्तु औजार हुन्थे हाम्रा लागि । बिहान कुखुरो बासेदेखि रातको एघारबाह्र बजेसम्म काममा जोतिनुपथ्र्यो र पो अहिले चार गाँस खाने एक धरो लगाउने र यही भए पनि मुन्टो लुकाउने झुपडी जोडेका छौँ । धन्दा नमान, तिमीहरूले हामीले जस्तो बिजोग खेप्नु पर्दैन । तिमीहरूलाई राम्ररी हातखुट्टा नलगाई म मर्दिनँ । (आँखाभरि आँसु बनाउँछिन् । मामूको अवस्थाले प्रमिला पनि दुःखित हुन्छिन् र गहभरि आँसु पार्छिन् ।)
प्रमोद ः मामू ! तपाईं दिदीसँगमात्र कुरा गर्नुहुन्छ ? मसँग पनि गर्नुस् न । दिदी जति त म पनि बुझिहाल्छु नि ।
मञ्जरी ः तिमी पनि बुझ्छौ छोरा, म तिमीसँग पनि कुरा गर्छु । फरक यति हो कि म तिमीसँग जीवनभर कुरा गरिरहन्छु, दिदीसँग गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ ! भन्न गाह्रो हुन्छ । यस कुरूप समाजले दिदीलाई ठगेको छ बा । उनी त आज यहाँ छिन्, भोलि कहाँ पुग्छिन्, कसलाई के थाहा ? जोई बन्ने मान्छेले पोइको खटनमा चल्नुपर्छ । सासू–ससुराको बुहार्तन खप्नुपर्छ । तिमीलाई के थाहा ?
प्रमोद ः अहँ मामू, दिदी जहाँ जानुहुन्छ, म पनि त्यहीँ जान्छु । म त दिदीलाई छाड्दै छाड्दिनँ । दिदीसँग भएँ भने कसैले हेप्न पनि पाउँदैन । कसैको पिटाइ पनि खानु पर्दैन । दिदी स्कुल गए म पनि जान्छु, दिदी क्याम्पस गए म पनि सँगै हुन्छु । म त सधैँ दिदीसँगै हुन्छु ।
मञ्जरी ः (मञ्जरी मुस्कुराउँदै) हुन्छौ, खुब हुन्छौ होला नि ! दिदीभिनाजुसँग हुँदा पनि साथमै हुन्छौ त ?
प्रमोद ः जुनसुकै हालतमा पनि म दिदीसँगै हुन्छु ।
मञ्जरी ः (मञ्जरी हाँस्दै) स्याबास् छोरा, स्याबास् ।(सबैजना हाँस्छन् । पर्दा बिस्तारै खस्दै जान्छ ।)